ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Shijiazhuang hongmeida Trading Co. , Ltd.
တစ်ဝက် Finger လက်အိတ်
Band လက်အိတ် Marching
Parade & အခမ်းအနားလက်အိတ်
SPA လက်အိတ် / ခြေအိတ်
Deluxe Velcro လက်အိတ်
လဲမှို့ Deluxe လက်အိတ်
သေချာချုပ်ကိုင်ထား Deluxe လက်အိတ်
သိုးမွှေး & အားကစားလက်အိတ်
Hotmill လက်အိတ်အလုပ်လုပ် Canvas
Shijiazhuang hongmeida Trading Co. , Ltd. သည်လက်အိတ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး ISO9000, ISO14001 နှင့် ISO18001 ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကို ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အနှစ် ၂၀ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်မြောက်ပိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးလက်အိတ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်လုပ်သား ၈၀၀ ကျော်နှင့်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းကိရိယာစုံ ၁၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအာမခံဌာန၊ နည်းပညာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနစသည်တို့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်ဝါဂွမ်းလက်အိတ်များ၊ လောကဝတ်လက်အိတ်များ၊ polyester လက်အိတ်များနှင့်အခြားအပ်ချုပ်လက်အိတ်များကိုအဓိကထုတ်လုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်သည်ဖောက်သည်များအားကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောထုတ်ကုန်များနှင့်အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ၀ န်ဆောင်မှုများအားပေးအပ်ရန်မှာ“ ဖောက်သည်ပထမ ဦး စားခြင်း၊ အရည်အသွေးကို ဦး တည်ခြင်း” ဖြစ်သည်။
အရည်အသွေးကောင်းလက်အိတ်ပစ္စည်းများ - Xinjiang မှ ၁၀၀% ကြာရှည်သောချည်၊ polyester, ဝါဂွမ်းရောနှောထားသော polyester, spandex နှင့်အတူဝါ, spandex နှင့် polyester, satin ect ။
အမျိုးမျိုးသောလက်အိတ်စတိုင်များ - ကျွန်ုပ်တို့မှာဝါဂွမ်းလက်အိတ်များ၊ နိုင်လွန်လက်အိတ်များ၊ သိုးမွေးလက်အိတ်များ၊ အလှဆင်ထားသည့်ချုပ်ရိုးများ၊ မင်္ဂလာလက်အိတ်များနှင့်အတူလက်အိတ်နှစ်ချောင်း၊ ရှည်လျားသောလက်ကောက်ဝတ်၊ သေချာချုပ်ကိုင်ထားသောလက်အိတ်များ၊ နှင့်ကွင်းဆက်, လက်ညှိုးထိုးလက်အိတ် ECT ။
အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်း - ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ ကျေးလက်ဒေသတွင်တည်ရှိသောကြောင့်အလုပ်သမားတောင်သူများသည်တရုတ်တောင်ပိုင်းထက်နိမ့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ရုံများမဟုတ်ဘဲကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါ။ စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်ဒေသတွင်းစျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုအားဖြည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်။ HMD Glove စက်ရုံမှတိုက်ရိုက် ၀ ယ်ယူခြင်းသည်သင်၏အချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။
ကုန်ကြမ်းမှအပြီးသတ်လက်အိတ်အထိအာမခံထားသောအရည်အသွေး - HONGMEIDA လက်အိတ်စက်ရုံသည် ISO9001 အရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်အိတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည် ISO9001 အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုလိုက်နာပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်အလုပ်သမား ၈၀၀ ကျော်ရှိပြီးစက် ၁၀၀၀ ကျော်ပို့ဆောင်ချိန်ကိုအာမခံထားရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရောင်းချပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ သင့်တွင်လက်အိတ်များရရှိပြီးနောက်သင်၌မေးခွန်းများ (သို့) ပြifနာရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားပြန်လည်ဖြေကြားပေးပြီး ၁၂ နာရီအတွင်းဖြေရှင်းချက်ပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးအကြံဥာဏ်မှာ“ အရည်အသွေးပြည့်ဝစွာ၊ သုံးစွဲသူ ဦး စားပေး” ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တရုတ်ပြည်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသောမိတ်ဖက်ဖြစ်လာရန်မိမိကိုယ်ကိုမြှုပ်နှံသည်။
၁။ အမှာစာတိုင်းကိုစစ်ဆေးပါ၊ ထည်အလေးချိန်၊ ဇာထိုးစတိုင်၊ အရောင်ကြည်လင်မှုကိုစစ်ဆေးပါ
3. ပထမ ဦး ဆုံးစစ်ဆေးခြင်းအခါသံ
၄။ အထုပ်မတိုင်မီဒုတိယအကွိမ်စစ်ဆေးခြင်းအတွဲကိုလက်ချင်းကိုင်။ စစ်ဆေးပါ။
၅။ ကျွန်ုပ်တို့၏ QC အဖွဲ့မှတတိယအကြိမ်စစ်ဆေးခြင်းကိုအပြီးသတ် package မှ AQL2.5 အရကျပန်းဖြင့်ရွေးချယ်ပါ
6. ၀ န်ဆောင်မှုအားဖြင့်စတုတ္ထစစ်ဆေးခြင်း၊ ပြီးဆုံးသောအထုပ်မှ AQL2.5 အရကျပန်းရွေးပါ
၇။ ဖောက်သည် (သို့) တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကပဉ္စမစစ်ဆေးခြင်း - ပစ္စည်းတင်ပို့မှုနမူနာကိုဖောက်သည်များသို့ပေးပို့ခြင်းမပြုမီအတည်ပြုရန်ပေးပို့ပါ။
ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်း - အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ နျူကလီးယားစက်ရုံစက်မှု၊ လျှပ်စစ်စက်မှုလုပ်ငန်း၊ နွေးထွေးစွာထားရှိမည်၊ Band ည့်ခံပွဲ၊ quet ည့်ခံပွဲ၊ quet ည့်ခံပွဲ၊ စုပေါင်းဝတ်ပြုရာ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ဒိုမန်း၊ လိမ်းဆေးနှင့်နှင်းခူပြproblemsနာများအတွက်ကောင်းမွန်သည်။
ဖုန်း+86 139 3382 3597
လိပ်စာ:အမှတ် ၅၅၃ Taihua လမ်း၊ XinHua ခရိုင်၊ Shijiazhuang Hebei, China
ကလေးများအဖြူရောင်လဲမှို့လက်အိတ်, White ကလဲမှို့လက်အိတ်, လဲမှို့လက်အိတ်, White ကလဲမှို့ချုပ်လက်အိတ်, အလေးချိန်လဲမှို့လက်အိတ်, လဲမှို့လက်အိတ်,